Dongguan Glory Star Laser Technology Co., LTD, intsebenziswano Sino-German, ugxininise laser iteknoloji & izicelo, emva kweminyaka ezintsha rhoqo kunye nophuhliso, uye waba ezaziwayo-kakuhle omkhulu umenzi kwezixhobo laser.
Le nkampani ungumnikazi sakhiwo ofisi, R & D Building, ivenkile machining, ukupeyinta, kunye nevenkile iintsimbi, ivenkile ukuhlangana, showroom mihla kunye mveliso standard-mveliso.
iimveliso eziphambili Le nkampani zezi metal laser ukusika oomatshini, non-metal laser ukusika oomatshini, oomatshini ukumakisha laser, oomatshini iwelding laser kunye ukugoba machines.The amandla yonyaka imveliso 8,000 Iiseti iimveliso ezithengiswa kumazwe angaphezu kwe-100 kunye nemimandla.
Le nkampani iye yachongwa njengoko kwishishini abaxhakaxhaka wesizwe, kwaye ngokuphindaphindiweyo waphumelela iteknoloji Innovation Award. Abe njengenkosana izixhobo laser, Glorystar Laser technology Co., Ltd inkqubo epheleleyo R & D, kunye neeyunivesithi abaziwayo yasekhaya abaninzi kunye namaziko ophando ukugcina intsebenziswano olusondeleyo woqondo kunye nobugcisa, naye Nanyang Institute of isayensi nethekhinoloji Graduate abebefunda base.
Products wenza EU CE isatifikethi kunye certification SGS, nakuzo zonke iinkalo engenayo, inkqubo, umatshini, nokuthumela kunye nezinye ukuthotyelwa kunye nezikhokelo ezisemgangathweni kunye nolawulo lokusingqongileyo yolawulo inkqubo ISO ukuqinisekisa ukuba umgangatho kazwelonke. Ukuthwala imboniselo emehlweni Global, GLORYSTAR uyaqhubeka ngokugxila inzululwazi laser kunye nobugcisa ukuze sabelane nawe kwixesha elizayo ngempumelelo!